မိုးတွင်းမှာ ထီးပျောက်ရှကျန်တာတွေ ဖြစ်လို့ ခဏခဏပြန်ဝယ်နေရသူများအတွက်
12 Jul 2018 . 3:31 PM
မိုးတွင်းဆို ရာသီဥတုက နေလို့ ထိုင်လို့ ကောင်းပြီး အေးသွားပေမယ့် တစ်ဖက်မှာလည်း အပြင်သွားတာနဲ့ စိုစိစိုစိနဲ့ စိတ်ညစ်စရာပါ။ မိုးတွင်းဆို ကိုင်ရတဲ့ အိတ်နဲ့ Laptop ပါရင် Laptop၊ ကားသော့ အိမ်သော့နဲ့ လူလည်း မစိုအောင် ထီးဆောင်းရသေးတယ်။ မိုးတွင်းပြဿနာအတက်ဆုံးကတော့ အပြင်သွားတဲ့အခါ အိမ်မှာ ထီးမေ့ကျန်ခဲ့လို့ ဒုက္ခရောက်ရတာနဲ့ ထီးကို အပြင်တနေရာမှာ မေ့ကျန်တတ်ခဲ့လို့ ခဏခဏ ပြန်ဝယ်ရတာပါပဲ။
ထီးကို အာရုံစိုက်လွန်းပြန်ရင်လည်း ထီးကလွဲပြီး ကျန်တာအားလုံးမေ့ကျန်တတ်ခဲ့ပြန်ရော။ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့လို မေ့တတ်တဲ့သူဆို ပိုဆိုးတာပေ့ါ၊ ခုမိုးတွင်းဝင်စမှာပဲ ထီးပြန်ဝယ်ရတာ နှစ်ချောင်းရှိပြီ။ ဒီလို မေ့တတ်တဲ့သူတွေအတွက် အရာရာမေ့မကျန်အောင် လုပ်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ ရှာဖတ်ကြည့်တော့ ဒါမျိုးလေးတွေ တွေ့တယ်၊ လိုက်လုပ်ကြည့်တော့ အဆင်ပြေတာမို့ ခုလို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
၁) ပထမဆုံးအချက်ကတော့ လူတွေ ပြောသလို ရိုးရိုးလေးပဲ၊ မမှတ်မိရင် ချရေးပါတဲ့။ အဲ့ဒါ တကယ် အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အပြင်သွားရင် ယူသွားရမယ့်အရာတွေကို ချရေးထားရုံနဲ့ မှတ်မိနိုင်စွမ်းကို ၅၀% လောက်ပိုတိုးလာစေပါတယ်။ ချရေးရုံတင်မဟုတ်ဘဲ ပါးစပ်က တတွတ်တွတ်ရွတ်ပေးရင် မှတ်မိနိုင်စွမ်း တိုးတက်လာမှာပါ။
၂) တစ်ကြိမ်မှာ တစ်ခုပဲ အာရုံစိုက်ပါ။ ကလေးထိန်းရင်း၊ ချတ်နေရင်း ရုတ်တရက် အပြင်ထထွက်ရတော့မယ်ဆိုရင်တော့ ထီးမေ့ကျန်သွားဖို့ သိပ်လွယ်သွားပါပြီ။ အလုပ်များတယ်ဆိုပေမယ့် တစ်ကြိမ်မှာ တစ်ခုပဲ အာရုံစိုက်ပြီး လုပ်မယ်ဆိုရင် မေ့ကျန်စရာတွေ မရှိတော့ဘူးပေါ့။
၃) ပုံလေးတွေနဲ့ တွဲမှတ်ပါ၊ လုပ်စရာရှိတာတွေ၊ သယ်သွားရမယ့် ပစ္စည်းတွေ၊ တက်ရမယ့်ပွဲတွေကို စာနဲ့မှ တ်လို့ အဆင်မပြေသေးရင် ပုံလေးဆွဲပြီး တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ချိတ်ဆက်မှတ်ထားရင် ပိုမှတ်မိစေပါတယ်။
၄) ဦးနှောက်ကို လေ့ကျင့်ပေးပါ။ Sudoku လို ဂိမ်းတွေဆော့ပေးတာမျိုး၊ သချာင်္တွက်ပေးတာမျိုးနဲ့ ဦးနှောက်ကို လေ့ကျင့်လို့ ရပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်တာအပြင် ဘယ်လက်နဲ့ စာရေးကျင့်တာမျိုးကလည်း ဦးနှောက်ရဲ့ တခြားအစိတ်အပိုင်းတွေကို လေ့ကျင့်ပေးတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက် အရာဝတ္ထုတွေကို ပို မှတ်မိလွယ်စေပါတယ်။
၅) ကောင်းကောင်းစား၊ ကောင်းကောင်းနားပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလည်း လုပ်ပေးပါ။ ဒါကတော့ ပစ္စည်းတွေမေ့မကျန်ရုံတင် မဟုတ်ပါဘူး၊ ကျန်းမာရေးအတွက်ပါ ကောင်းစေတာမို့ လုပ်သင့်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အိမ်က အထွက် ဒါမှမဟုတ် သင်တန်းက အပြန်မှာ ဝုန်းဒိုင်းကြဲ မထွက်ဘဲ ယူမယ့် အရာတွေ၊ ချရေး၊ တစ်ခုချင်းစီ ပြန်စစ်၊ ထီးမေ့တတ်လွန်းရင် ထီးပုံလေးတွေဆွဲပြီး အိမ်တံခါးအဝမှာ၊ ဒါမှမဟုတ် ပိုက်ဆံအိတ်မှာ ကပ်ထားပြီး သတိထားမယ်ဆိုရင် မိုးတွင်းမှာ ထီးတွေအများကြီး ပျောက်တဲ့ ဒုက္ခကနေ ကင်းဝေးသွားမှာပါ။ ကဲ! ခုပဲ လုပ်ကြည့်လိုက်ရအောင်။
Source : Telegraph ၊ www.instructables.com
မိုးတှငျးမှာ ထီးပြောကျရှကနျြတာတှေ ဖွဈလို့ ခဏခဏပွနျဝယျနရေသူမြားအတှကျ
မိုးတှငျးဆို ရာသီဥတုက နလေို့ ထိုငျလို့ ကောငျးပွီး အေးသှားပမေယျ့ တဈဖကျမှာလညျး အပွငျသှားတာနဲ့ စိုစိစိုစိနဲ့ စိတျညဈစရာပါ။ မိုးတှငျးဆို ကိုငျရတဲ့ အိတျနဲ့ Laptop ပါရငျ Laptop၊ ကားသော့ အိမျသော့နဲ့ လူလညျး မစိုအောငျ ထီးဆောငျးရသေးတယျ။ မိုးတှငျးပွဿနာအတကျဆုံးကတော့ အပွငျသှားတဲ့အခါ အိမျမှာ ထီးမကေ့နျြခဲ့လို့ ဒုက်ခရောကျရတာနဲ့ ထီးကို အပွငျတနရောမှာ မကေ့နျြတတျခဲ့လို့ ခဏခဏ ပွနျဝယျရတာပါပဲ။
ထီးကို အာရုံစိုကျလှနျးပွနျရငျလညျး ထီးကလှဲပွီး ကနျြတာအားလုံးမကေ့နျြတတျခဲ့ပွနျရော။ အထူးသဖွငျ့ ကြှနျတျောတို့လို မတေ့တျတဲ့သူဆို ပိုဆိုးတာပေ့ါ၊ ခုမိုးတှငျးဝငျစမှာပဲ ထီးပွနျဝယျရတာ နှဈခြောငျးရှိပွီ။ ဒီလို မတေ့တျတဲ့သူတှအေတှကျ အရာရာမမေ့ကနျြအောငျ လုပျတဲ့ နညျးလမျးတှေ ရှာဖတျကွညျ့တော့ ဒါမြိုးလေးတှေ တှတေ့ယျ၊ လိုကျလုပျကွညျ့တော့ အဆငျပွတောမို့ ခုလို မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။
၁) ပထမဆုံးအခကျြကတော့ လူတှေ ပွောသလို ရိုးရိုးလေးပဲ၊ မမှတျမိရငျ ခရြေးပါတဲ့။ အဲ့ဒါ တကယျ အလုပျဖွဈပါတယျ။ အပွငျသှားရငျ ယူသှားရမယျ့အရာတှကေို ခရြေးထားရုံနဲ့ မှတျမိနိုငျစှမျးကို ၅၀% လောကျပိုတိုးလာစပေါတယျ။ ခရြေးရုံတငျမဟုတျဘဲ ပါးစပျက တတှတျတှတျရှတျပေးရငျ မှတျမိနိုငျစှမျး တိုးတကျလာမှာပါ။
၂) တဈကွိမျမှာ တဈခုပဲ အာရုံစိုကျပါ။ ကလေးထိနျးရငျး၊ ခတျြနရေငျး ရုတျတရကျ အပွငျထထှကျရတော့မယျဆိုရငျတော့ ထီးမကေ့နျြသှားဖို့ သိပျလှယျသှားပါပွီ။ အလုပျမြားတယျဆိုပမေယျ့ တဈကွိမျမှာ တဈခုပဲ အာရုံစိုကျပွီး လုပျမယျဆိုရငျ မကေ့နျြစရာတှေ မရှိတော့ဘူးပေါ့။
၃) ပုံလေးတှနေဲ့ တှဲမှတျပါ၊ လုပျစရာရှိတာတှေ၊ သယျသှားရမယျ့ ပစ်စညျးတှေ၊ တကျရမယျ့ပှဲတှကေို စာနဲ့မှ တျလို့ အဆငျမပွသေေးရငျ ပုံလေးဆှဲပွီး တဈခုနဲ့ တဈခု ခြိတျဆကျမှတျထားရငျ ပိုမှတျမိစပေါတယျ။
၄) ဦးနှောကျကို လကေ့ငျြ့ပေးပါ။ Sudoku လို ဂိမျးတှဆေော့ပေးတာမြိုး၊ သခြာင်္တှကျပေးတာမြိုးနဲ့ ဦးနှောကျကို လကေ့ငျြ့လို့ ရပါတယျ။ ဒီလိုလုပျတာအပွငျ ဘယျလကျနဲ့ စာရေးကငျြ့တာမြိုးကလညျး ဦးနှောကျရဲ့ တခွားအစိတျအပိုငျးတှကေို လကေ့ငျြ့ပေးတာမြိုးဖွဈတဲ့အတှကျ အရာဝတ်ထုတှကေို ပို မှတျမိလှယျစပေါတယျ။
၅) ကောငျးကောငျးစား၊ ကောငျးကောငျးနားပွီး လကေ့ငျြ့ခနျးလညျး လုပျပေးပါ။ ဒါကတော့ ပစ်စညျးတှမေမေ့ကနျြရုံတငျ မဟုတျပါဘူး၊ ကနျြးမာရေးအတှကျပါ ကောငျးစတောမို့ လုပျသငျ့ပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ အိမျက အထှကျ ဒါမှမဟုတျ သငျတနျးက အပွနျမှာ ဝုနျးဒိုငျးကွဲ မထှကျဘဲ ယူမယျ့ အရာတှေ၊ ခရြေး၊ တဈခုခငျြးစီ ပွနျစဈ၊ ထီးမတေ့တျလှနျးရငျ ထီးပုံလေးတှဆှေဲပွီး အိမျတံခါးအဝမှာ၊ ဒါမှမဟုတျ ပိုကျဆံအိတျမှာ ကပျထားပွီး သတိထားမယျဆိုရငျ မိုးတှငျးမှာ ထီးတှအေမြားကွီး ပြောကျတဲ့ ဒုက်ခကနေ ကငျးဝေးသှားမှာပါ။ ကဲ! ခုပဲ လုပျကွညျ့လိုကျရအောငျ။